SAADAAL: Super Computer Oo Saadaaliyay Kaalmaha Horyaalka Premier League, Kooxda Uu Horyaalka U Rajeeyay & SADDEX Kooxood Oo Uu Fadeexad Dhex Dhigay. - Gool24.Net
November 8, 2019 Apdihakem Omer Adem
Il wareedka caanka ah ee TalkSport ayaa go’aansaday inay iyaga oo isticmaalaya Super Computer oo ah aalad xoog badan saadaaliyaan miiska kama dambaysta ah ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan iyo sida kaalmaha loo kala gali doono.
Horyalaka ayaa haatan laga ciyaaray 11 kulan waxaana uu miisku durtaba u muuqdaa mid qaabaysmaya iyadoo sida ay noqon doonto koox kasta iyo halkay ku dambayn doonto haatanba lasii sawiran karo.
Liverpool ayaa haatan hoggaanka lix dhibcood kaga haysa kooxda difaacanysa koobka ee Manchester City kahor kulanka xoogan ee ay labada kooxood sida tooska ah Axadan ugu kulmi doonaan Anfield.
Aan ku bilawnee saadaasha Super Computer ayaa ah mid ka farxinaysa jamaahiirta Liverpool maadaama oo uu hanashada horyaalka u rajeeyay saadaaliyayna inay markii ugu horreysay ku guuleysan doonaan horyaalka England 30 sano kaddib.
Booska labaad ayuu markan u rajeeyay kooxda labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay kusoo guuleysatay horyaalka ee City halka uu saddexaad galiyay kooxda da’yarta u badan ee Chelsea ee uu hoggaanka u yahay Frank Lampard.
Aaladan ayaa booska afraad u rajaynaysa Leicester City oo xilli ciyaareedkan qaab duufaan ah ku bilaabatay haatana booska saddexaad kaga jirta horyaalka halka uu waji gabax ku riday kooxaha dhibaataysan ee Arsenal, Tottenham iyo Manchester United.
Arsenal ayuu u saadaalinayaa booska shanaad iyadoo lixaad uu u rajeeyay Tottenham halka uu booska toddobaad galiyay kooxda tababare Ole Gunnar Solskjaer ee Manchester United.
Saddexda kooxood ee heerka labaad u dhacaya ayuu u saadaaliyay kooxaha Norwich City oo dhawaan soo dalacday, Southampton oo guuldarrada ugu culus taariikhda horyaalka la kulantay toddobaadyo kahor iyo Watford oo aan ilaa haatan guuleysan.